ယုံကြည်မှုအရောင်းဆိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ယုံကြည်မှုအရောင်းဆိုင်
Posted by ေက်ာ္ဘသစ္ on Dec 28, 2013 in Creative Writing, Short Story | 13 comments
“ယုံကြည်မှုတွေ ရမယ်နော်.. ယုံကြည်မှုတွေ.. ယုံကြည်မှုတွေ”
“တစ်ဆယ်သားမှ ငါးရာတည်း၊ တစ်ဆယ်သားမှ ငါးရာတည်း”
“အလျားနဲ့ ဝယ်မယ်ဆိုရင် တစ်ပေကို ရှစ်ရာ၊ ပုလင်းနဲ့ဆိုရင် တစ်ပုလင်း ခုနှစ်ရာ၊ သုံးမျိုးပေါင်းယူရင်တော့ တစ်ထောင့်ငါးရာနဲ့ ရမယ်၊ ယုံကြည်မှုတွေ ယုံကြည်မှုတွေ”
“ကဲ ကဲ.. လာထား လာထား.. အရောင်အသွေးစုံ၊ ကာလာစုံတယ်နော်”
“အဓိပ္ပါယ်မျိုးစုံ၊ စိတ်ကူးမျိုးစုံ၊ အကြောင်းအရာမျိုးစုံပါတဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ၊ ဝယ်မလား.. ဝယ်မလား၊ ဦးရာလူနဲ့ ထိုက်ရာလူပဲ ရမယ်နော်”
နေအလွန်တရာပူပြီး အိတ်ကပ်ထဲ ဘီယာသောက်စရာ ပိုက်ဆံ တစ်ပြားမှမရှိတဲ့ တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော်ဟာ လူစည်းကားရာ မဟာဗန္ဓုုလပန်းခြံထောင့် တစ်နေရာမှာ ယုံကြည်မှုတွေ ဖြန့်ခင်း ရောင်းချနေပါတယ်။
လက်တစ်ဖက်နဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကို အဆုပ်လိုက် အဆုပ်လိုက် ကိုင်မြှောက်ပြ၊ တစ်ဖက်ကလည်း လော်စပီကာ ခပ်သေးသေး တစ်လုံးနဲ့ လမ်းဘက် လှည့်အော်ပြီး လမ်းသွားလမ်းလာတွေကို ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ပေါ့။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကပဲ အရည်အသွေး ကောင်းလွန်းလို့လား (ဒါမှမဟုတ်) ဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာ ကျွန်တော့်လို ယုံကြည်မှုရောင်းတဲ့သူ တစ်ယောက်မှ မရှိတာကြောင့်ပဲလားမသိ၊ ကျွန်တော် ဈေးစခင်းတယ် ဆိုရင်ပဲ ကျွန်တော်ဝန်းကျင်မှာ ယုံကြည်မှုစားသုံးသူတွေ ကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်ကားလာပါတယ်။
ကျွန်တော်ရောင်းချနေတာဟာ လမ်းဘေးဈေးဖြစ်တာကြောင့် လမ်းဘေးဈေး ဆိုတဲ့အတိုင်း ပစ္စည်း အတုလား၊ အစစ်လား ခွဲခြားဖို့ ခက်တာမို့ စားသုံးသူတစ်ချို့က မဝယ်ခင်အရင် မြည်းစမ်း ကြည့်ပါရစေ တောင်းဆိုတယ်။
ကျွန်တော်ကလည်း စားသုံးသူအခွင့်အရေးကို နားလည်စွာနဲ့ “မိဘပြည်သူများ စိတ်တိုင်းကျ စမ်းသပ်သုံးစွဲ ကြည့်နိုင်ကြောင်း” ပြောပြီး ယုံကြည်မှုတစ်ချို့ကို နမူနာမြည်းခွင့် ပေးလိုက်တယ်။
လူတစ်ယောက်က ယုံကြည်မှုပုလင်းတစ်လုံးကို ယူပြီး ခပ်ဆဆလှုပ်၊ အဖုံးဖွင့်ပြီး တစ်ငုံမော့ကြည့်တယ်။ “အရသာက မိုက်လှချည့်လား” ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ ဘေးက သူ့သူငယ်ချင်းကို မျက်ခုံး ပင့်ပြတယ်။ ပြီး “ကျွန်တော်တို့ ငါးပုလင်း ယူမယ်ဗျာ” ပြောပြီး ဈေးတောင် မဆစ်တော့ဘဲ ငွေထုတ်ရှင်းနေလေတော့ရဲ့။
နောက်တစ်ယောက်က ယုံကြည်မှုတစ်ချပ်ကို လက်ထဲကိုင်ပြီး ထောင်လိုက် တစ်မျိုး၊ အလျားလိုက်တစ်ဖုံ ဖြန့်ကြည့်၊ အလင်းရောင်မှာ ခံကြည့်၊ ပြီးလို့ ကျေနပ်သွားတော့မှ “ကျွန်တော့်ကို သုံးကိုက်တိတိ ညှပ်ပေးဗျာ” ဆိုပါလေတော့ရဲ့။
စားသုံးသူတစ်ယောက်ကဆိုရင် ယုံကြည်မှုတစ်ဖဲ့ကို ယူပြီး ဝါးစားကြည့်တယ်။ ပြီး အထိတ်တလန့် ဖြစ်သွားဟန်နဲ့ သူ့အိတ်ကပ်ထဲ ပြာပြာသလဲ နှိုက်ပြီး သူ့မှတ်ပုံတင်သူ ပြူးတူးပြဲတဲ ထုတ်ကြည့်တယ်။
ဘေးက သူငယ်ချင်းက “ဘာဖြစ်တာလဲ… ဘာဖြစ်တာလဲ” မေးတော့မှ “ဆွေမျိုးမေ့တဲ့အထဲ ကိုယ့်အဖေနာမည်ပါ ပါသွားလို့၊ ပြန်သတိရအောင် လုပ်နေရတာ” လို့ ပြန်ပြောရဲ့လေ။ ပြီးမှ သူ့အဖေအတွက်ရော တစ်ဆွေလုံး တစ်မျိုးလုံးစာပါ “ယုံကြည်မှု နှစ်ပိဿာတိတိ ပေးဗျာ” ပြောပြီး ဝယ်ယူ ထွက်ခွါသွားလေတော့ရဲ့။
ဒီလိုပဲ.. တစ်ချို့က ယုံကြည်မှုတွေကို စီးကရက်အစီခံမှာ သုတ်ပြီး ဖွာစမ်းကြည့်ကြ၊ တစ်ချို့က အကျီလုပ် ဝတ်ကြည့်ကြ၊ တစ်ချို့က အင်္ကျီချိုင်းကြားမှာ ဆွတ်ကြည့်ကြ၊ တစ်ချို့က ကဗျာတစ်ပုဒ်လို အစမ်းဖတ်ကြည့်ကြ။
တစ်ချို့က အနီးအနား မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်က ဟင်းရည် တစ်ပန်းကန်မှာပြီး ယုံကြည်မှုနဲ့ ရောမွှေစားကြတယ်။ တစ်ချို့က ပါလာတဲ့ လက်ပ်တော့ကွန်ပြူတာထဲ install လုပ်ပြီး သုံးကြည့်ကြ၊ တစ်ချို့က mp3 player ထဲ ထည့်၊ နားကြပ်နဲ့ ထိုးပြီး နားထောင်ကြ။
နောက်ဆုံးတော့ အားလုံးဟာ တိုင်ပင်ထားကြသလို ကျွန်တော့်ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကို ယုံယုံကြည်ကြည် ယုံကြည်သွားကြရဲ့။
ကျွန်တော့်ယုံကြည်မှုတွေထဲမှာ နှစ် ၃ဝ စာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း၊ သူဌေးဖြတ်လမ်း၊ သူတော်ကောင်းဖြတ်လမ်း၊ ခုနှစ်ပြည်ထောင် အနံ့သင်းတဲ့ ပန်းပေါင်းစုံ ရေမွှေးနဲ့ နေ့ဘက်မှာလိမ်းတဲ့ day cream တွေ ပါတယ်။ (ဒီခရင်မ်နဲ့ဆို သင့်မျက်နှာဟာ ချက်ချင်း လူကြီးလူကောင်း ဆန်သွားလိမ့်မယ်လို့ အညွန်းမှာ ဆိုထားရဲ့။)
ကျွန်တော့်ယုံကြည်မှုတွေထဲမှာ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ် ခေါက်တုန့် ခေါက်ပြန် ဗီဇာ၊ ငရဲပြည်ကလွှင့်တဲ့ တီဗီချန်နယ်နဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ကိုယ်ကျင့်တရားလမ်းညွှန်ပါတယ်။ (ဒီလမ်းညွှန် ဖတ်ပြီးတဲ့အခါ သင့်အနေနဲ့ တစ်ခြားဘယ်လမ်းညွှန်ကိုမှ ဂရုစိုက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ အညွှန်းမှာ ဆိုထားရဲ့။)
ကျွန်တော့်ယုံကြည်မှုတွေထဲမှာ ခေတ်ပေါ်ပညတ်တော် ၁၀ရ ပါး၊ ပေးပြီး ပြန်လှည့်ကြည့်စရာမလိုတဲ့ ကတိ၊ စတိဗ်ဂျော့ဘ်ရဲ့ လက်ရှိလိပ်စာ၊ ပြီး ၂၅၀ဝ ဂစ်ဂါဗိုက်ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကုသိုလ်တော်မှတ်တမ်း file လည်း ပါတယ်၊ (စာရင်းအားလုံးကို သင့် account ထဲ အလွယ်တကူ ပြောင်းထည့်ပြီး အလိုလို ကုသိုလ်ရှင်ကြီး ဖြစ်သွားမတဲ့)။
ကျွန်တော့်ယုံကြည်မှုတွေထဲမှာ ကလေးကြိုက် ပုံပြင်တစ်အုပ်၊ လက်နဲ့ လုပ်တဲ့ စင်ကြယ်မှုနဲ့ အော်တိုမက်တစ် အမှန်တရားတစ်ချို့ ပါတယ်။ (တစ်ယောက်ယောက်က မမှန်တဲ့အကြောင်း ထောက်ပြချင်ရင်တောင် မမှန်ကြောင်းသက်သေ ခိုင်ခိုင်လုံလုံ ရှာဖွေမရနိုင်တဲ့ အမှန်တရားတွေတဲ့လေ။)
ကျွန်တော့်ယုံကြည်မှုတွေထဲမှာ အမြန် ရည်းစာရှာနည်း၊ ကြာရှည် ရည်စားထားနည်း၊ စိတ်မနာအောင် ရည်းစားဖြတ်နည်းတွေအပြင် အသည်းကွဲသံ တချွင်ချွင်မြည်စေမယ့် အပေါ်အကျီတွေလည်းပါတယ်။ (ဒီအင်္ကျီဝတ်လိုက်တာနဲ့ လူတိုင်းက သင့်ကို သနားချစ်ခင်ကြလိမ့်မယ် ဟူ၏။)
ပြီးတော့…. ကျွန်တော် ရောင်းချပေးနေတဲ့ ယုံကြည်မှုတွေထဲမှာ ချစ်သူအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ပေးခွင့်မရလိုက်တဲ့ ကောင်ကင်တမွတ်က တက်ဆွတ်ထားတဲ့ ကြယ်တစ်စင်းလည်း ပါသေးရဲ့။ (ဒီတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော် အသုံးမပြုချင်တော့လို့ လိုအပ်သူရှိရင် အလကား ထိုးထည့်ပေးလိုက်တော့ဖို့ပါပဲ။)
လူတစ်ချို့က ကျွန်တော့်ယုံကြည်မှုတွေကို အခဲလိုက်လေးတွေ ဝယ်ကြတယ်။ အိမ်မှာ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပြီး တစ်နေ့ နည်းနည်းချင်း စားသုံးသွားဖို့ပါပဲ။ ကျွန်တော့်ယုံကြည်မှုတွေက နှစ်ချို့လာတာနဲ့အမျှ ပိုပြီး အဟာရဖြစ်တယ်လို့ အညွှန်းမှာ ပြဆိုထားရဲ့လေ။
တစ်ချို့က အရောင်စုံတဲ့ ကျွန်တော့်ယုံကြည်မှုတွေကို ပေနဲ့ တိုင်းပြီး အချပ်လိုက် ဝယ်ကြတယ်။ အိမ်ရောက်တာနဲ့ မှန်ဘောင် ကွပ်ပြီး ဧည့်ခန်းနံရံမှာ ချိတ်ဆွဲထားဖို့ ရည်ရွယ်ကြဟန်ရှိရဲ့။
တစ်ချို့ကျတော့လည်း လေးထောင့်ပုံ ယုံကြည်မှုလေးတွေ ရွေးဝယ်ကြ။ အဲဒီလေးထောင့်ပုံလေးတွေကို ခြင်းလှလှလေးထဲ စုထည့်ပြီး အထက်အရာရှိကို ကန်တော့ဖို့ဆိုလားပဲ။
တစ်ချို့ လက်ထဲရောက်မှ ယုံကြည်မှုတွေထဲ ရေနည်းနည်းထိုး၊ အလေးနည်းနည်းခိုးပြီး တစ်ဆင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလိုသူတွေကတော့ ပိဿာချိန်တစ်ထပ်၊ အချပ်လိုက်တစ်ခင်း၊ ပုလင်းတွေနဲ့ တစ်ဖုံ စုံအောင်ဝယ်ယူနေကြတော့ရဲ့။
မိုးဦးကျ ညဉ့်ဦးယံ ပလူတွေ တွင်းထဲက တဝီဝီ ပျံထွက်လာသလိုမျိုး ယုံကြည်မှုတွေ မြို့ကြီးရဲ့ လမ်းမတွေပေါ် တဖွဲဖွဲ ပျံထွက်လာခဲ့တယ်။
ဧည့်ခန်းမျက်နှာကျက်မှာ၊ မီးပွင့်တွေမှာ၊ အပြင်ဘက် တံစက်မြိတ်အောက်မှာ၊ မီးဖိုချောင်မှာ၊ ရေချိုးခန်းထဲမှာ၊ ကြွေဇလုံထဲမှာ၊ လှေခါးထစ်တွေမှာ၊ ခြေနင်းခုံမှာ၊ အိမ်ရှေ့မြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာ၊ ဘီယာဆိုင်တွေမှာ၊ လဘက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ ယုံကြည်မှုတွေ ပျံဝဲလို့။
ယုံကြည်မှုအငွေ့တွေ ရိုက်ခတ်ပြီး ပြူတင်းတစ်ချပ် မှုန်ဝါးသွား၊ ယုံကြည်မှုတစ်ချောင်းနဲ့ တိုက်မိ ကော်ဖီခွက် မှောက်သွား၊ ယုံကြည်မှုတစ်စက် ပြုတ်အကျ အကြော်မီးဖိုက မီးတောက်တစ်ချက် ဟုတ်ခနဲ ထတောက်။
ယုံကြည်မှုအလုံးကြီးတစ်လုံး လဘက်ရည်ဆိုင်ကနေ လမ်းမပေါ် တလိမ့်လိမ့် လိမ့်ထွက်သွား၊ ကုန်တင်ကားတစ်စီးရဲ့ ဘီးနဲ့ ကြိတ်မိ၊ ပြားချပ်သွား၊ ခဏနေတော့ ယုံကြည်မှုဟာ ပကတိအတိုင်း အလုံးကြီး ပြန်ဖြစ်၊ နီးစပ်ရာ တက္ကစီတစ်စီးရဲ့ ပြူတင်းပေါက်ထဲ ခုန်ဝင်လိုက်ပါသွားတော့ရဲ့။
ယုံကြည်မှုတစ်စ လေယာဉ်ပျံပေါ် လိုက်ပါသွားတယ်။ (ပတ်စ်ပို့နဲ့ ဗီဇာ ချက်ကင်လုပ်စရာမလို)။ ဒီလိုနဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ် ၁၂/…. နဲ့ လူတစ်ယောက်ကို လိုက်ရှာ၊ တွေ့တာနဲ့ အဲဒီလူရဲ့ နားထင်မှာ ပင့်ကူတစ်ကောင်လို တွယ်ကပ်၊ ယုံကြည်မှုအမျှင်တွေ သူ့ပါးစပ်တွေ၊ နားတွေ၊ နှာခေါင်းတွေနဲ့ နောက်ဆုံး တစ်ခေါင်းလုံးကို ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ ပစ်လိုက်တော့ရဲ့။
ယုံကြည်မှုအမြှုပ်တွေ ကျမ်းစာအုပ်ထဲ လှဲနေရာက တရားဟောဆရာ တစ်ယောက်ရဲ့ နှုတ်ဖျားကတစ်ဆင့် တဖျောဖျော တွားတက်သွား၊ သိပ်မကြာခင် သူ့နှုတ်ဖျားကပဲ တဇီဇီ ပြန်ထွက်လာ။
စင်မြင့်ပေါ်မှာ၊ စပီကာအကြီးကြီးထဲမှာ၊ ရပ်ကွက်ထဲမှာ၊ သစ်ပင်ပေါ်မှာ၊ ဆိုက်ကားပေါ်မှာ။ ယုံကြည်မှုအမြှုပ်တွေ နားတစ်ပေါက်ထဲ ဝင်သွား၊ တစ်ခြားတစ်ပေါက်က ထွက်လာ၊ ပြီး နောက်တစ်ယောက်ရဲ့ နားတစ်ပေါက်ထဲ ဝင်သွားပြန်၊ တစ်ခါ ပြန်ထွက်လာ၊ ညအခါ သူတို့တွေ ကျမ်းစာအုပ်ထဲ ပြန်ဝင်အိပ်ကြ။
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ယုံကြည်မှု တဒက်ဒက် ပစ်ခတ်သံ ကြားရပြီးနောက် လူတစ်ယောက် ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး ဆန်ကာပေါက်တွေ ဖြစ်၊ မြေကြီးပေါ် ဘုန်းခနဲ လဲကျ၊ အဲဒီ့နောက် သူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ယုံကြည်မှုတစ်ချို့ တစ်စိမ့်စိမ့် စီးကျလာတော့ရဲ့။
ပလူတွေ အတောင်ပံကျွတ်တဲ့အခါ သူတို့ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်လဲ ကျွန်တော် မသိ။ ယုံကြည်မှုတွေ အဓိပ္ပါယ်ကျွတ်ကုန်တဲ့အခါမှာတော့ ယုံကြည်မှုဟာ ယုံကြည်မှုအဖြစ် ဟန်မပျက် ကျန်ရစ်တယ်။ မြို့ကြီးရဲ့ လမ်းမတွေပေါ်မှာ အတုံးအရုန်း လွင့်စင်ပြန့်ကြဲ၊ တစ်ချို့ မှောက်ခုံ။ တစ်ချို့ ပက်လက်၊ တစ်ချို့ ဒေါင်လိုက်၊ တစ်ချို့ အိုင်ဖွဲ့။
ကျွန်တော်ဟာ အဲဒီပြန့်ကြဲကြွေကြနေတဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကို လူတွေအိပ်မောကျနေတုန်း တိတ်တဆိတ် တစ်စချင်း လိုက်ကောက်ခဲ့တာပါပဲ။ ကောက်လို့ ရသမျှ ယုံကြည်မှုတွေကို မျက်နှာပြင်တွေ အရောင်ပြန်တင်၊ အရည်အဖြစ်၊ အခဲအဖြစ်၊ အငွေ့အဖြစ်၊ ပုံစံမျိုးစုံ၊ ဆိုက်မျိုးစုံ၊ ထုပ်ပိုးမှုမျိုးစုံနဲ့ စားသုံးဖို့အရံသင့် ပြင်ဆင်၊ ပြီးတော့ ဆာလာအိတ် အကြီးကြီး တစ်လုံးထဲ စုပြုံထည့်၊ ပြီးတော့ အခန်းလွတ်တစ်ခုထဲ နှစ်အတော်ကြာ ထိုးသိမ်းထားခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့ အမြော်အမြင်ကြီးမှုဟာ အခုလို နေကလည်း ပူ၊ အိတ်ကပ်ထဲလည်း ဘီယာသောက်စရာ ပိုက်ဆံ လုံးလုံးပြတ်တဲ့ အချိန်ရောက်တော့ အခုလိုပဲ ကျွန်တော့်ကို လာရောက် ကယ်တင်တော့ရဲ့လေ။
“ယုံကြည်မှုတွေ.. ယုံကြည်မှုတွေ.. ”
ကျွန်တော် လော်စပီကာ ခပ်သေးသေးတစ်လုံးနဲ့ အော်ခေါ် ရောင်းချနေတုန်းမှာပဲ မျက်နှာတည်တည်နဲ့ လူတစ်ယောက် လူအုပ်ကြားထဲ ဝင်လာတယ်။ ယုံကြည်မှုတစ်ချို့ကို သူ့လက်နဲ့ ဆုပ်ကြည့်၊ ချေကြည့်၊ ခပ်ဆဆ မ,ကြည့်၊ ပြီး ကျွန်တော့်ကို မယုံသင်္ကာ မျက်လုံးတွေနဲ့ ကြည့်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးလာတော့ရဲ့၊
အတွင်းထဲမှာ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှ မရှိကြတော့ဘူး၊ ဒါနဲ့များ လူတွေ ပြန်အသုံးပြုလို့ ဘယ်လိုလုပ် ကောင်းစားနိုင်တော့မလဲ”
သူမေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းကြောင့် လူတစ်ချို့ သူတို့လက်ထဲက ရွေးလက်စ ယုံကြည်မှုတွေကို အသာချရင်း ကျွန်တော့်ကို ဝိုင်းကြည့်ကြတယ်၊ အားလုံး တွေတွေဝေဝေတွေ ဖြစ်ကုန်ကြ။
ကျွန်တော်ကတော့ တွေဝေနေတတ်သူ မဟုတ်။ အဖြေကို အစောကြီးကတည်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခဲ့တယ်။
“အဓိပ္ပါယ် ဟောင်းလောင်းဖြစ်နေခြင်းကိုက အတွင်းထဲမှာ အဓိပ္ပါယ် အပြည့်ရှိနေခြင်းပဲလေ”
ဟိုလူ ကျွန်တော့်ကို စိုက်ကြည့်နေပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ပရိသတ်ကြီးဘက် လှည့်ပြီးတော့ပဲ ဆက်ရှင်းပြလိုက်တယ်။
“ယုံကြည်မှုတစ်ခုမှာ နဂိုက ဘာအဓိပ္ပါယ်တွေ ရှိခဲ့သလဲ ခင်ဗျားတို့ စဉ်းစားစရာမလိုဘူး၊ ခင်ဗျားတို့ တကယ် စဉ်းစားရမှာက ခင်ဗျားတို့ လက်ထဲ ရောက်လာတဲ့အခါ အဲဒီ့ယုံကြည်မှုထဲ ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်တွေ ထည့်ပြီး သုံးစွဲကြမလဲ ဆိုတာပဲ၊
ဟောဒီမှာ နမူနာကြည့်..၊ ယုံကြည်မှုထဲ ထည့်သုံးလို့ရတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ။
ယုံကြည်မှု = တမလွန်လောက
ယုံကြည်မှု = လူအထင်ကြီးခံရခြင်း
ယုံကြည်မှု = တစ်ယူသန်ခေါင်းမာမှု
ယုံကြည်မှု = ကားအကောင်းစား
ယုံကြည်မှု = စားဝတ်နေရေး
ယုံကြည်မှု = hypocrisy
ယုံကြည်မှု = ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ညာဘက် ပါးပြင်ပေါ်က ပါးချိုင့်လေး..၊
ကြည့်…၊ ခင်ဗျားတို့အတွက် အဆင်ပြေမယ့်အဓိပ္ပါယ် တစ်ထောင် တစ်သောင်း ပြောင်းထည့်သွားရုံပဲ”
ကျွန်တော် ရှင်းပြလိုက်တော့ စောစောက မေးခွန်းထုတ်တဲ့လူ ကျွန်တော့်ကို ပြုံးကြည့်ရင်း ခေါင်းတဆတ်ဆတ် ညိတ်တယ်၊ ပြီး ဘာမှထပ်မပြောတော့ဘဲ (ကျွန်တော့်ဆီက ယုံကြည်မှုတစ်ခုမှလည်း မဝယ်ဘဲ) ဆိုင်နဲ့ ဝေးရာ ထွက်ခွါသွားတော့ရဲ့။
သူ ဘယ်ထွက်သွားလဲ ကျွန်တော့်မှာ စိတ်မဝင်စားအား။ ကျွန်တော့် ဖွင့်ဆိုချက်အဆုံးမှာ စောစောက ငိုင်သွားတဲ့သူတွေ ယုံကြည်ချက်တွေ ပိုမိုခိုင်မာလာ၊ ခပ်လှမ်းလှမ်းက လမ်းသွားလမ်းလာတွေပါ ကျွန်တော့်ဆိုင်ဘက် အငမ်းမရ ဝိုင်းအုံလာကြတော့ ကျွန်တော့်မှာ ယုံကြည်မှုစားသုံးသူ ဈေးကွက်ကြီးကို လက်မလည်အောင် ကိုင်တွယ်နေရရဲ့လေ။
အခုအခါမှာတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အော်ဖို့ မလိုတော့ဘဲ လော်စပီကာ ခပ်သေးသေးတစ်လုံးနဲ့ အသံပဲ သွင်းဖွင့်ထားလိုက်တယ်။
“ယုံကြည်မှုတွေ ရမယ်နော်.. ယုံကြည်မှုတွေ.. ယုံကြည်မှုတွေ” “တစ်ဆယ်သားမှ ငါးရာတည်း၊ တစ်ဆယ်သားမှ ငါးရာတည်း၊ အလျားနဲ့ ဝယ်မယ်ဆိုရင် တစ်ပေကို ရှစ်ရာ၊ ပုလင်းနဲ့ဆိုရင် တစ်ပုလင်း ခုနှစ်ရာ၊ သုံးမျိုးပေါင်းယူရင်တော့…………. ”
ခေါင်းစဉ်က စပြီး စာသားအဆုံးထိ လူကို တရကြမ်းဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့ရေးသားဖန်တီးမှုအစွမ်းကို တအံ့တဩ တွေ့လိုက်ရတယ်ဗျာ။
တလက်စတည်း သတင်းပေးခဲ့ပါရစေ ။
အခု လာမယ့် ပြခန်းအမှတ် ၁၄ မှာ ထည့်သွင်းပြသပါမယ် လို့ ။
ပြခန်း ၁၄ က ဒီလကုန်ပြီး တစ်ရက်နှစ်ရက် အတွင်းမှာ တက်ပ့မယ်ခင်ဗျ
ရွာထဲမှာ ဆြာတစ်ပါး တိုးလာပါတကားးးးးးးး
ဖတ်သွားပါတယ်။ နှစ်ထပ်ရှိမှတ်မိအောင်နှစ်ခေါက်ဖတ်ဖတ်သွားပါတယ်။ ဆြာတွေရေးတာမို့ ရေးတေးတေး တော့သိလိုက်သလိုပဲ
တကယ့်မော်ဒန်ပါပဲလား။ လေးစားပါတယ် ဆရာကျော်ဘသစ်။
တကယ်ကို ဆန်းသစ်လှပတဲ့ ပို့စ်ပါပဲဗျာ Bravo ပါ ကိုကျော်ဘသစ်
ယုံကြည်မှု ၁ ပိဿာ ဝယ်ရင် အပြန်အလှန် လေးစားမှု ၅ ကျပ်သားလောက် အဆစ်ပေးမားးး
@ Ma Ma, TNA
ဆရာတော့ မဟုတ်ပါ၊ လက်တည့်စမ်းကြည့်နေတာပါ…
@ နန်းတော်ရာသူ၊ ဝင်းပြုံးမြင့်
ဆုတွေဘာတွေတော့ ရရင် အလိုချင်သား… ဟား… ဟား…
မော်ဒန်ရယ် ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါ၊ ရေးတတ်သလို ရေးတာပါ။
@ သူကြီး၊ ပိုင်လေး၊ ကေဇက်
ယုံကြည်မှုတွေဟာ ရေထိုးတာ များလာကုန်ပြီး အခု ဈေးကွက်ပျက်သလောက် ဖြစ်နေပါပြီ…။
ပြီ ဒါမျိုးက ကိုယ်နဲ့ မသိတဲ့သူတွေကို ညာရောင်းတာပဲ ကောင်းတယ်။
လူသိတွဆို ခဏနေ ကိုယ့်ဆီလာပြီး ကွန်ပလိန့် တက်ကြတော့မှာလေ…. ။
အနော်က ယုံကြည်မှု.. phobia ရှိတယ်ဗျ…
ကောင်းတယ်ဗျာ။ အတွေးသစ် အရေးသစ် တွေနဲ ့ကျွန်တော်တို ့အတုယူ လေ့လာပြီး ရေးရမယ့် အရေးအသားတွေပါ။ဂုဏ်ယူပါတယ်။